Dadka degan Sydney waa inay wataan aqoonsi si ay u caddeeyaan inay 6 mayl u jiraan guryahooda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Australia » Dadka degan Sydney waa inay wataan aqoonsi si ay u caddeeyaan inay 6 mayl u jiraan guryahooda
Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Dadka deggan Sydney hadda waa inay wataan aqoonsi si ay u caddeeyaan inay 6 mayl u jiraan guryahooda
Dadka degan agagaarka Greater Sydney hada waa inay "wataan cadeyn muujineysa cinwaankooda ayna soo bandhigaan cadeynta hadii looga baahdo sarkaal boolis" hadii ay ugu yaraan yihiin 18 sano.
Bannaanka "isu imaatinnada dadweynaha," oo ay ku jiraan jimicsiga, waxay ku eg yihiin ugu yaraan laba qof oo "koox" ah.
Inta banaanka lagu jiro, dadka degan waa inay ku ekaadaan 10km guryahooda.
Kaliya hal qof qoyskiiba ayaa banaanka u bixi kara si “ay u helaan cunto, alaabo ama adeeg hal mar maalintii.”
Iyadoo Australiyaanka Sydney ay isku diyaarinayaan inay galaan usbuucii saddexaad ee qufulka, the dawlada New South Wales waxay soo saartay ogeysiis maanta, oo looga baahan yahay dhammaan dadka deggan agagaarka Greater Sydney inay sitaan dukumiinti aqoonsi shaqsiyeed meel ka baxsan guryahooda, si saraakiisha sharci fulinta ay had iyo jeer u hubiyaan inay ku jiraan meel loo ogol yahay 6 mayl (10 kiilomitir) guryahooda.
Sharciga deganayaasha Sydney waa inuu sitaa ogeysiiska dawlada aqoonsiga oo uu ku saxeexan yahay Brad Hazzard, wasiirka caafimaadka iyo cilmibaadhista ee NSW, wuxuu qeexayaa in "isu imaatinka dadweynaha", oo ay ku jiraan jimicsiga, ay ku egyihiin in aan ka badnayn laba qof "koox", oo ay tahay inay joogaan 10km u jira guryahooda.
Dadka degan agagaarka Greater Sydney “ee u baxa jimicsi ama bannaanka firaaqada” waa inay “ku ekaadaan degmooyinkooda maxalliga ah ama gudaha 10 kiiloomitir guryahooda,” sida ku xusan ogeysiiska, waana inay “keenaan caddeyn muujineysa cinwaankooda oo ay soo saaraan caddeyn haddii sarkaal boolis looga baahan yahay inuu sameeyo ”haddii ay ugu yaraan yihiin 18 sano.
Xayiraadaha sharcigu way ka sii adag yihiin kuwa doonaya inay raashin soo iibsadaan, iyadoo qofkiiba qoyskiiba uu banaanka u aadi karo “inuu raashin, alaab ama adeeg ka helo hal mar maalintii.”
Greater Sydney waa la xiray illaa iyo Juun 26, in kasta oo xiritaanka la qorsheeyay inuu dhammaado laba toddobaad ka dib, waxaa lagu kordhiyay toddobaad dheeri ah maaddaama kiisaska COVID-19 ay sii socdaan in la ogaado.
Ka dib markii la ogaaday in ugu yaraan 27 qof oo qaba cudurka 'COVID-positive' ay ku maqnaayeen aagga Sydney muddadii ay ku jireen cudurka, NSW Premier Gladys Berejiklian ayaa ka digtay in tirooyinku "noo sheegayaan in maalmaha soo socda numbers labadaba kiisaska iyo nasiib-darrada tirada dadka laga yaabo inay soo gaadhaan ama ay soo gaadhaan, bulshada dhexdeeda ayaa kor u kici doonta. ”
Laba toddobaad ka hor qufulka ayaa la bilaabay.